FAMPISAMBORANA AN’I RIANA ANDRIAMANDAVY VII : Milaza ho tsy mahalala ny fanenjehana, Rakotomanana Honoré | NewsMada
“Hangataka ny famaritana ny heloka nataony”, Rakotomanana Honoré.
Manoloana ny fanenjehana an’ny loholona Riana Andriamandavy VII , tanterahin’ny Fitsarana, amin’izao fotoana izao. Milaza ho tsy mahalala na inona na inona ny Filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré. Mety hisy ny fanapahan-kevitra raisin’ny birao maharitra amin’ity anio ity…
Nivoaka ny faramparan’ny herinandro iny ny didy fampisamborana, ny loholona Riana Andriamandavy VII, izay niainga avy amin’ny Tonia mpampanoa lalàna ambony eo anivon’ny Fitsarana. Nilaza ny heviny momba io ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotomanana Honoré, omaly maraina. Nambarany fa tsy mahalala ny fisian’ny didy mampisambotra na didy fampisamborana ny tenany. “Hatramin’izao tsy mahalala ny fisian’ny taratasy fampiantsoana ny loholona Riana Andriamandavy VII ny tenako. Mbola tsy misy ihany koa ny taratasy avy amin’ny mpampanoa lalàna ambony tonga aty aminay. Anjaran’izy ireo no manoratra aty amiko milaza ny antony anaovana ny taratasy fiantsoana na didy mampisambotra na didy fampisamborana”, hoy izy. Nohazavainy fa tokony hisy ny famaritana ny heloka nataony fantatry ny eo anivon’ity andrim-panjakana ity, indrindra fa ny birao maharitry ny Antenimierandoholona.
Navoitran-dRakotomanana Honoré fa hanatanteraka fivoriana ny eo anivon’ny birao maharitry ny Antenimierandoholona, ny amin’ity anio ity. Ity antenimiera ity, araka ny fantatra, ao anatin’ny fivoriana ara-potoana, amin’izao fotoana izao. Hisy ny fandraisana fanapahan-kevitra hotontosain’izy ireo, momba ity raharaha ity, raha toa ka tsy misy ny taratasy avy any amin’ny Tonia mpampanoa lalàna ambony azon’izy ireo. Nanteriny fa raha tsy tonga any aminy io taratasy io, handefa taratasy fangataham-panazavana izy ireo ary ny Birao maharitra no tompon’ny teny farany. Notsindrian’ny filohan’ny Antenimierandoholona fa tsy mbola misy ny iraka tanterahin’ireo loholona any ampitan-dranomasina mandritra izao fivoriana ara-potoan’ny Antenimierandoholona izao. Tsiahivina, fa tokony ho nosamborina ny zoma teo, ity loholona ity, saingy noho ny tsy fandraisana andraikitra na vokatry ny fitavozavozana, tafaporitsaka any Guanzouh Sina, ny loholona Andriamandavy VII. Aiza ny tena fampiharana ny tany tan-dalàna marina?
Une réponse à "FAMPISAMBORANA AN’I RIANA ANDRIAMANDAVY VII : Milaza ho tsy mahalala ny fanenjehana, Rakotomanana Honoré"
Rakotoarisoa Maminiaina N 10/05/2017 à 08:49
Natao ho any mpanohitra ny fampiharana ny lalàna eto@tsika.Mirary soa tompoko